Madaxweynayaashii hore oo gaaray Degmada Cadale – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia - Idman news
Madaxweynayaashii hore oo gaaray Degmada Cadale – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia
Mohamoud 2 days ago 1 min read
Madaxweynayaashii hore ee dalka soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa safar dhulka ugu ambabaxay magaalada Muqdisho iyagoo gaaray degmada Cadale ee gobolka shabeelaha dhexe.
Labada madaxweyne markii ay gaareen Cadale waxaa soodhaweeyay mas;’uuliyiinta Maamulka degmada & qeybaha kala duwan ee Bulshada ee halkaa ku nool.
Ujeedka safarkooda Madaxweynayaashi hore ay ku tagayaan deegaano ka tirsan Shabeellaha Dhexe ayaa la xiriira u kuur gelida xaalada deegaano ka tirsan Shabeellaha Dhexe iyo kulamo ay la qaataan maamulka degmada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmada Cadale.
Waa markii ugu horeysay ee safarka dhulka ah ay ku tagaan Madaxweynayaashii hore soomaaliya islamarkaana ay si wadajir ah u booqdaan deegaano ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabelle.
Waxaana madaxdaani kaga horeesay deegaanka Cadale ee gobolka shabeelaha dhexe Madaxweynaha Maamulka Hir-Shabeelle Cali Guudlaawe Xuseen iyo wafdi uu hoggaaminaayo, kuwaas oo halkaa u tagay indho indheen iyo xalinta beelo degan halkaasi oo tabasho qaba.
Previous Tobonaan ruux oo lagu xiray dibad baxyo ka soconaya wadanka Kolombiya. – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia
Next Jenaraalka loo magacaabay Hogaaminta Ciidamada Amxaarada
Madaxweynaha Hirshabeelle oo kormeeray goob la qorsheynayo in laga dhiso garoon diyaaradeed “SAWIRRO”
Xog: Beel Cali Guudlaawe ka hor-istaagtay shir lagu qabtay magaalada Cadale
Antoine Griezmann oo ku wargaliyay Barcelona kooxda uu doonayo inuu u dhaqaaqo – Gool FM
Maamulka Degmada Baydhabo Oo Kulan Looga Hadlaayey Dardargalinta Goosashada Sab…
International passengers may now be separated based on COVID vaccination status at Pearson airport July 24, 2021
Maamulka Gobolka Banaadir oo kulan duco ah u sameeyay Shuhaddada dhacdadii 24-July 2019 “SAWIRRO” July 24, 2021
Antoine Griezmann oo ku wargaliyay Barcelona kooxda uu doonayo inuu u dhaqaaqo – Gool FM July 24, 2021
Maamulka Degmada Baydhabo Oo Kulan Looga Hadlaayey Dardargalinta Goosashada Sab… July 24, 2021
Cities are trying to phase out gas stoves to reduce carbon emissions — but cooks are pushing back July 24, 2021